Vivo U10: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Vivo waxay soo jeedisay inay cusboonaysiiso taleefannadooda kala duwan bishan. Muddo yar oo ka badan toddobaad waxay nooga tageen dhawr telefoon, sida Waxaan ku noolahay NEX 3 iyo Vivo V17 Pro. Astaantu hadda waxay nooga tagaysaa taleefan cusub, markan dhexdiisa ah. Waa Vivo U10, oo horeyba rasmi looga dhigay.
Vivo U10 wax badan ayuu leeyahay astaamaha ku badan bartanka dhexe, sida processor-keeda, inkasta oo dhinacyada qaar ay ka xishoon tahay, maadaama aysan la imaan 48 kamaradood oo MP ah, sidii aan ula qabsan jirnay xilligan dhexe. Laakiin waa qaab loo hoggaansamo.
Naqshadeynta taleefanka ayaa weli la jaan qaadaya waxa aan maanta suuqa ku aragno. Tiro ahaan qaab dhibic biyo ah, wax dheeraad ah oval kiiskan, kaas oo siinaya taleefanka qaab casri ah. Dhabarka gadaashiisa waxaan ka helaynaa saddex kamaradood guud ahaan, marka lagu daro dareeraha faraha taleefanka.
Vivo Z1X: Nooca ugu sarreeya bartamaha ayaa dib loo cusbooneysiiyay
1 Tilmaamaha Vivo U10
Tilmaamaha Vivo U10
Waxay ku jirtaa qaybta hoose ee heerka dhexe, haddii aan diirada saarno qeexitaankiisa, laakiin taas maahan waa mid ka sii liidata. Maaddaama Vivo U10-kan uu na siinayo waxqabad wanaagsan, waa isu dheellitiran yahay guud ahaan, kaamirooyinka ayaa si buuxda u hoggaansamaya waxayna leedahay batari weyn. Marka waxay ballanqaadaysaa inay tahay ikhtiyaar wanaagsan, oo leh qiime wanaagsan oo lacag ah. Kuwani waa faahfaahinta buuxda ee taleefanka:
Shaashad: 6,35-inch IPS LCD leh HD + Xallinta (1.544 x 720 pixels)
Kaydinta Gudaha: 32GB / 64GB (oo lagu ballaarin karo kaarka micro SD)
Kaamirada gadaal: 13 MP oo leh f / aperture f / 2.2 + 8 MP oo leh aperture f / 2.2 + 2 MP oo leh aperture f / 2.4
Nidaamka qalliinka: Android 9 Pie oo leh Funtouch OS 9.1
Batariga: 5.000 Mah oo leh 18W lacag deg deg ah
Isku xirnaanta: 4G / LTE, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 5.0, microUSB, Dual SIM, GPS, GLONASS
Kuwa kale: Akhristaha faraha gadaal
Miisaan: 190,5 garaam
Guud ahaan waa taleefan si fiican u shaqeyn doona. Vivo U10 waxay isticmaashaa processor caan ah oo dhex dhexaad ah, sida Snapdragon 665, kaasoo siiya waxqabad wanaagsan guud ahaan. Waxa kale oo ay la timaaddaa dhowr isku-darka ah ee RAM iyo kaydinta oo laga kala xusho, sidaa darteed isticmaale kasta ayaa dooran kara midka ugu fiican kiiskooda gaarka ah. Dareeraha faraha ee taleefanka ayaa ku yaal dhabarka, ugu yaraan waxaan aragnaa inuu leeyahay, taas oo ah war wanaagsan. Batariga wuxuu leeyahay awood balaaran, oo leh 5.000 Mah, ismaamul wanaagsan.
Vivo U10 waxay la imaaneysaa kamarad gadaal seddex ah kiiskan. Dareemaha ugu muhiimsan waa 13 MP, oo ay la socdaan laba kale, mid ka mid ah 8 MP iyo seddex meelood meel 2 MP. Waa iskudhaf wanaagsan, oo aan noqon kuwa ugu fiican suuqa, laakiin waa isu dheelitiran tahay, sidaas darteed waxaan awoodi doonnaa inaan sawirro wanaagsan ku qaadno bartan-dheereedka sumadda Shiinaha. Waxay la timaaddaa Android Pie oo ah nidaamka qalliinka, in kasta oo ay horeba u lahayd lakabka cusub ee qaabeynta, Funtouch OS 9.1 si rasmi ah.
Vivo U10 ayaa la xaqiijiyay in xilligan laga joogo Hindiya, taas oo noqon doonta suuqii ugu horreeyay ee taleefanka lagu iibsado. Laga bilaabo Sebtember 29Axadan, waxaa suurtagal ah in la iibsado bartan-dhexdhexaad ah nooca Shiinaha si rasmi ah. Xaqiiqdii toddobaadyadan soo socda waxaa laga bilaabi doonaa suuqyo kale oo Aasiya ah, laakiin xilligan ma jiraan wax xog ah. Ka bilaabashadeeda Yurub, sida taleefannada astaamaha, uma badna.
Telefoonku wuxuu ku bilaabmayaa seddex RAM iyo qaabeynta keydinta, sidaan ku aragnay qeexitaankiisa. Qiimaha isku-dhafan ee Vivo U10 ee Hindiya horay ayaa loo yaqaan, iyagu waa kuwa soo socda:
Qaabka 3/32 GB waxaa lagu bilaabay qiimo dhan Rs 8.990 (qiyaastii 115 euro)
Nooca leh 3/64 GB wuxuu ku kacayaa 9.990 rupees (qiyaastii 128 euro in la beddelo)
Qaabka 4/64 GB waxaa lagu qiimeeyaa Rs 10.990 (qiyaastii € 141)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Vivo U10: Nooca dhexdhexaadka ah ee astaanta ayaa dib loo cusbooneysiiyay
Furitaanka fashilku wuxuu keenaa Google Pixels inuu wareego